Sequin Lace - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Sequin Lace)
Indwangu ye-Shiny Red Sequin Lace Embroidery
Ama-Sequins abelokhu ethandwa ngumphakathi, futhi isizathu esikhulu umuzwa wakhe wensimbi, uzokhanya ukuthi ngabe liselangeni noma ebusuku. Futhi izingubo nezimvunulo ezenziwe ngensimbi ziningi, futhi usephenduke umdwebi wabaklami. Le ndwangu ebomvu ye-sequin ingumphumela wokusetshenziswa kwe-luster yensimbi,...
Igolide bekulokhu kuthandwa ngumphakathi. Noma ngabe kuyigolide, imigexo yegolide, ingcebo yegolide nesiliva, izinhlamvu zemali zegolide, imigoqo yegolide, njll. Konke kuyigolide. Igolide liwuphawu lwengcebo nobuhle. Indwangu yethu eyenziwe ngegolide futhi inencazelo ejulile, ama-sequins wegolide acwebezelayo athungwe...
Yonke intombazane iyazithanda izimbali, kodwa angizithandi. Ngithanda ukukunikeza izimbali. Izimbali ezincane ezenziwe ngama-sequins zifafazwa njengeziqhwa zeqhwa kulayini osobala, muhle futhi uhlanzekile. Ukumsebenzisa ukwenza isiketi noma ingubo yomshado kuyinto enhle kakhulu futhi ihlakaniphile. Yimuphi umuntu...
Indwangu ye-Transparent Sequin Lace Embroidery Material
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha ngendwangu ye-lace enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka eyi-10. Isitayela osibukayo yindwangu ye-Transparent sequin tulle lace eyenziwe nge-100% polyester nokuhlobisa yi-sequin esezingeni eliphakeme. Zonke i-crystal sequin ziqinisekisiwe...
Indwangu emhlophe ye-White Sequin Embroidry Tulle Lace Fabric
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bendwangu abasebenza kahle nge-sequin embodiery lace Indwangu enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Isitayela osibukayo sisezingeni eliphakeme le-sequin tulle lace lendwangu eyenziwe yenziwa nge-100% polyester nokuhlobisa nge-sequin ecacile....
Indwangu ye-Sequin Lace Embroidery yokugqoka
I-Sequin Shiny Lace